अन्तिम सं स्कार हुनै लाग्दा आमा रोएको सुनेर ब्युँझिए किरन, घा टबाट फिर्ता गरि अस्पतालमा लागि उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/अन्तिम सं स्कार हुनै लाग्दा आमा रोएको सुनेर ब्युँझिए किरन, घा टबाट फिर्ता गरि अस्पतालमा लागि उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए !
तेलंगनाको सुर्यपेट जिल्लाको पिल्लालमर्री गाउँको घटना हो। त्यसरी नयाँ जीवन पाउने किशोरको नाम गंधम किरन हो। गंधमकी आमाका अनुसार जव उनी आफ्नो छोराको ‘मृ’त’ शरीर नजिक बसेर उनी निकै रोइरहेकी थिइन् त्यो समयमा उनले छोराको आँखाबाट पनि आँशु बगिरहेको देखिन्। लगत्तै उनले अरु आफन्तहरुलाई भनिन्।
गंधम किरनकी आमा सैदम्माले भनिन, ‘डाक्टरले छोराको हात समातेर भने कि उनी जिउँदैछन्। नाडी पनि चलिरहेको छ। त्यसपछि हाम्रो खुसीको सीमा नै रहेन।’हैदराबादका चिकित्सकको सल्लाहअनुसार सूर्यपेट जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकहरुले किरनको उपचार गरेका छन्। तीन दिनको उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए। निको भएपछि बिहीबार चिकित्सकहरुले किरनलाई डिस्चार्जसमेत गरेका छन्।
चिकित्सकहरुले उनलाई ग’म्भीर हेपाटाईटिस भएको बताए। स्वास्थ्य निकै खराब हुँदै गयो। त्यसको दुई दिनपछि २८ जुनमा उनलाई हैदरावाद लगियो। हैदराबाद लगेको केही दिनमै ३ जुलाईका दिन उनी कोमामा गए। कोमामा गएपछि चिकित्सकहरुले उनलाई ब्रेन डेथ भएको घोषणा गरेका थिए।